Naag internet nin ku mehersatay kuna furay qiso yaab badan
» Naag internet nin ku mehersatay kuna furay qiso yaab badan
Qisadan waa qiso aad u saamayn badan, waxaan ku dhashay magaaladda Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, balse waxaan kusoo barbaaray magaaladda Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasi ayaana waxaa kusoo qaatay waxbarashadeeda Hoose, Dhexe iyo Sare.
Sanadkii 1997-kii ayaa waxaa nasiib u yeeshay inaan aado dalka Canada, halkaasoo aan iminka ku noolahay, Azad waxaan isku baranay Shabakadda MSN-ka, anagoo wada socono muddo dhan laba sano ah ayaa waxaa ku heshiinay inaan is guursano, waxaan baray Aabahey oo markaasi noollaa, inkastoo uu dhawaan geeriyooday.
Azad markaan ismahersaneynay wuxuu ku noolaa dalka Suuriya, anagoo is arag ayaa waxaa ku heshiinay inaan ismahersano, waxaana dhihi karaa Azad waxaa weeye nin nolosheeda ku reebay taariikh aan ilaawsho laheyn.
Iyadoo ay xaaladdu sidaasi tahay ayaa wuxuu ninkii hore ee i qabi jiray uu Ceerigaabo ugu tagay qoyska aan ka dhashay iyo wiilal ila dhashay oo aan aad u jeclahay, deetana habeen iyo maalin waa uu ku dul ooyi jiray, wuxuuna dhihi jiray walaashiin aad baan u jeclahay, basle iyadaa i naceb, wax kasta waan u sameyn karaa, wax kasta waan u huri karaa, laakiin iima jeedo ayuu ku ooyi jiray.
Azad ayaa soo wacay si’ xun ayaa ugu qeyliyay waxaana ku dhahay, adiga ilama joogtid waxna iima qaban kartid ee walaale iskakey fur, boqolaal jeer oo horena sidaasi oo kale waan u dhahay, laakiin wuxuu ahaa nin wanaagsan oo waa uu i sasabi jiray.
Laakiin maalintaan markaan soo wacay oo aan si’ xun ugu qeyliyay kuna dhahay iskakey fur, ayaa wuxuu igu dhahay “Hadaad go’aansatay inaan iskakaa furo oo aadan iga xishooneen inaan ninkaaga ahay, orod oo guurso ninka kale ee aad ku qanacsan tahay” markii uu intaasi igu dhahay ayuu teleefankii igu damiyay.
Maalintaas wixii ka dambeysay wuxuu iska badalay teleefankii aan ku aqaanay, Emailkii aanu ku wada xiriiri jirnay, waxaan galay nolol mugdi badan, muddo hal sano ah maanan maqal war iyo wacaal ku saabsan toona, markii dambe anna waan iska fasaqay waxaana dib ugu soo laabtay ninkii hore ee i qabi jiray.
Hada waxaan ahay marwo xaas ah, waxaanu hada ninkaani isqabnaa muddo hal sano iyo bar ah, laba sano iyo bar-na meel aan ku sheego Azad magaranaayo, habeen iyo maalinse waxaan isku sifeeyaa inaan ahay naag dembi culus gashay,